चीन भ्रमणमा अर्थराजनीतिक अपेक्षा | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण चीन भ्रमणमा अर्थराजनीतिक अपेक्षा
लेख | दृष्टिकोण 89 views
चीन भ्रमणमा अर्थराजनीतिक अपेक्षा
असारको पहिलो साताका लागि तय भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि चैतको अन्तिम साता पहिलो छिमेक भ्रमण भारतबाट शुरू गरेका ओली २ महीनापछि उत्तर छिमेकी चीन जाने तयारीसँगै भ्रमणका एजेण्डा र उद्देश्यका बारेमा स्वाभाविक चर्चा चुलिएको छ । देशको कार्यकारी प्रमुख, त्यसमा पनि विशिष्ट परिस्थिति र विगत परिदृश्यका कारण प्रधानमन्त्रीको छिमेक भ्रमणप्रति चासोको ओज अन्य बेलाभन्दा बढी देखिएको हो । उदीयमान अर्थतन्त्रको होडमा अघि बढेका भारत र चीनबीचको आर्थिक एवम् सामरिक प्रतिस्पर्धाका कारण पनि नेपालको कार्यकारी प्रमुखको भ्रमणप्रति ती देशमा समेत विशेष चासो देखिन्छ ।
दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहनुका कारण यसको अवसर उपयोगभन्दा पनि हाम्रो कूटनीति एउटालाई देखाएर अर्कोलाई घुर्की लगाउनेजस्तो कमजोर आवरणमा देखा परिरहेको छ । विश्व राजनीति अब वैचारिकभन्दा आर्थिक हितकेन्द्रित भइराखेको तथ्यबीच भारत र चीन आफैमा एकअर्काका मुख्य व्यापारिक गन्तव्य हुन् । उनीहरूलाई एउटाको आर्थिक अभिवृद्धिका निम्ति अर्काको खाँचो छ । सामरिक सम्बन्ध जति नै चिसिए पनि आर्थिक हितका आयामहरूको खोजीमा लागेका बेला हाम्रो यो स्तरको कूटनीतिको औचित्य कति होला ? यो आफैमा सोचनीय विषय हो । प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणले उल्लिखित कूटनीतिक शैलीमा पुनःसंरचनाको सन्देश दिन सक्छ कि सक्दैन ? यही नै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सार्थकता प्रमाणित गर्ने कसी हुनेछ । भारत भ्रमणका अवयवको आलोकमा चीन भ्रमणका पहेलीहरू धेरै अर्थमा सत्तासीन राजनीतिको दृष्टिकोणको परिचायक बन्नेमा द्विविधा छैन ।
नेपालका कार्यकारी प्रमुखले छिमेक भ्रमणमा जाँदा के एजेण्डा लिएर जान्छन् र फर्किंदा के लिएर आउँछन् भन्नेलाई भ्रमणको सफलताको ओज मान्ने औसत अभ्यास छ । तर, यो तरीका प्रत्येक सन्दर्भमा उचित नहुन सक्छ । भौतिक रूपमा मापन गर्न नसकिने राष्ट्रियता, स्वाभिमान, आत्मसम्मानजस्ता पक्ष तथ्याङ्कमा देखाउन सकिन्न । सरकारको छिमेक व्यवहारले यस्ता कुरामा अर्थ राख्छ । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा दक्षिण छिमेकीको भूमिका र त्यसयता परिवर्तित व्यवहारको दृश्यावलीमा अहिले कार्यकारी प्रमुखकै हैसियतमा भइराखेका छिमेक भ्रमणले खास महत्त्व राख्छन् । त्यसक्रममा व्यक्त हुने प्रधानमन्त्रीको हाउभाउ, अभिव्यक्ति र सहकार्यको आयतनले छिमेकीको मनोविज्ञान निर्माणमा खास अर्थ राख्ने हुँदा सरकार यसमा सचेत हुन उत्तिनै जरुरी छ ।
भारत र चीनसितको असल सम्बन्ध र आपसी हित प्रवद्र्धनविना हामीले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक विकास, समृद्धि र खुशी भेट्टाउन सम्भव छैन । औसत वार्षिक आय साधारण खर्च धान्नसमेत अपर्याप्त भइरहेका बेला मित्र राष्ट्रहरूसितको सहकार्यविना आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्य फेला पार्न सकिन्न । सङ्घीय संरचनामा तीन तहको सरकार र प्रशासनिक खर्चको बढ्दो भारसँगै यो सरकारलाई कम्तीमा विकासको आधारमार्ग निर्माणको चुनौती छ । भन्दा जे भनिए पनि आन्तरिक स्रोतसाधनको दोहनका निम्तिसमेत बाह्य सहकार्यको विकल्प देखिएको छैन । दोहोरो अङ्कको आर्थिक अभिवृद्धि र दोब्बर प्रतिव्यक्ति आयका निम्ति त्यसका पूर्वाधार निर्माणको अनिवार्यतालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । यसो भन्दैमा आवश्यकता पूर्तिका निम्ति छिमेकीका अघिल्तिर लम्पसार पर्ने त ? होइन, अब कुनै पनि देशसित सहयोगको याचना गर्ने र हात फैलाउने कूटनीति बन्द गर्नुपर्छ । सहयोग होइन, आपसी हित र सहकार्यको हात अघि बढाउनुपर्छ । यसले मात्र सापेक्ष विकास र आत्मसम्मानलाई प्रवर्द्धन गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका सन्दर्भमा चीनसँगका सम्बन्धका आयामको सापेक्ष रूपान्तरका उपायको खोजी गरिनुपर्छ । नेपालको वर्तमान सत्ता नेतृत्वको चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर भारतीय संस्थापनमा एकखालको आशङ्का छ, त्यसलाई माभ्mन जरुरी छ । यसमा भारतीय पक्षको मनोविज्ञान कमजोर भए पनि एकातिरको सम्बन्धमा खटपट आउनेबित्तिकै अर्कापट्टि देखाएर घुक्र्याउन खोज्ने हाम्रै कूटनीतिका कारण यो आशङ्का सघन भएकोमा पनि द्विविधा मान्नु पर्दैन । हामी न भारतपरस्त हौं, न चीनपरस्त छौं । आप्mनो हितलाई केन्द्रमा राखेर दुवै छिमेकीसित सहकार्यका लागि तत्पर छौं भन्नेमा स्पष्ट हुन र पार्न अत्यावश्यक छ । यसो भनिराख्दा हाम्रो कूटनीतिले छिमेकका उचित चिन्ता र चासोलाई उपयुक्त तरीकाले सम्बोधन गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यसो हुन नसक्दा सहकार्य आशङ्कामुक्त हुन सक्दैन ।
भारत भ्रमणबाट रेलमार्ग, जलमार्ग, कृषिमा साझेदारीजस्ता एजेण्डा लिएर फर्किएका ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका एजेण्डामा बृहत् मन्थन भइराखेको छ । सचिव, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्स्तरीय छलफल र निर्णयको क्रम क्रमशः बाक्लिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा चीन भ्रमणमा जाँदा ओलीले द्विपक्षीय व्यापार विस्तार, पारवहन सुविधा, रेलमार्गलगायतमा एजेण्डा लिएर गएका थिए । त्यसमा खासै प्रगति नदेखिएको परिदृश्यमा हुन लागेको यो दोस्रो भ्रमणले पुराना योजनालाई कत्तिको गति दिन सक्छ, त्यो पर्खाइको विषय बनेको छ । अहिलेका एजेण्डा पुरानै विषयभन्दा फरक पनि छैनन् ।
आसन्न भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहयोग तथा समन्वयसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एजेण्डा राखिएकोमात्र छैन, यो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित नै गरिसकेको छ । यसले ऊर्जा र जलस्रोतमा सहकार्यका आधार निर्माण गरे पनि सार्थकताका निम्ति सम्झौता र सहकार्यको मोडेलको निक्र्योलतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । ऊर्जामा चिनियाँ लगानी ल्याउने हो भने भारतको विद्युत् खरीद निर्देशिकाका अवरोधलाई निकास दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालमा गरेको पछिल्लो भ्रमणमा भारतीय पक्ष यसमा सकारात्मक भएका कुरा आए पनि सुनिश्चितता अझै देखिएको छैन ।
२०७२ सालको मधेश आन्दोलनको कहरपछि नेपालले व्यापार र पारवहनका आयामलाई उत्तर छिमेकतिर पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवाज पक्ष भएर आएको छ । यो एकातिरको अप्ठ्यारोले अचेट्नुको उपजमात्र मान्ने हो भने उद्देश्यमा पुग्न सकिन्न । आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा चीनसित पनि व्यापार र पारवहनलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । उत्तरतिरका सम्भाव्यता नाकाको जतिसक्दो चाँडो सञ्चालन र तातोपानी नाका पुनःसञ्चालनलाई भ्रमणले प्राथमिक सूचीमा राख्नुपर्छ । केरुङ हुँदै काठमाडौं र त्यहाँबाट पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको कुरा नयाँ होइन । सरकारले यो योजनालाई भ्रमणको एजेण्डामात्र बनाएको छैन, आउँदो वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनलाई अटाइएको छ । यही योजनालाई टक्कर दिन भारत वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउन अघि सरेको बुभ्mनेहरूको कमी छैन । यहाँनिर हाम्रो सरोकारलाई यस्ता प्रतिस्पर्धाले सुरक्षित गर्दैनन् भन्नेमा सचेत हुन जरुरी छ ।
विश्वासमा आधारित सहकार्यले मात्र दुवै पक्षको हित निश्चित हुन सक्छ । यसमा छिमेकीलाई सहमत तुल्याउन हाम्रो कूटनीति सफल हुनुपर्छ । यो चातुर्य कूटनीतिमा देखिएन । यो परराष्ट्र मामिलाको कमजोर कडी पनि हो ।
हामीले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक विकास र दिगो समृद्धिका लागि ठूलो आकारको लगानीको खाँचो छ । यसमा स्वदेशी लगानी पर्याप्त हुन सक्दैन । हामीले निकट छिमेकीको लगानीलाई भिœयाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनको निजीक्षेत्रबीच ४० अर्ब रुपैयाँको लगानी समझदारी हुने कुरा आए पनि भरपर्ने आधार भने प्रकट भइसकेको छैन । केही अघि नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आयो, त्यसमा सबैभन्दा बढी ८ खर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता चीनबाटै आएको थियो । तर, त्यो सबै सेलाएर गयो । यसका निम्ति लगानीको सुरक्षा र आयको ग्यारेण्टीको वातावरण मिलाउनुपर्छ । भ्रमणमा दुई देशबीच लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण प्रत्याभूति सम्झौता (बिप्पा) हुने भनिएको छ । आशा गरौं, प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण द्विक्षीय हित प्रवद्र्धन र सहकार्यको नयाँ आयामको रूपमा स्थापित हुन सकोस् ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।